Xaalada Beledweyn oo saaka degan iyo dhinacyadii dagaalamay oo ka hadlay - Jowhar somali news leader
Xaalada Beledweyn oo saaka degan iyo dhinacyadii dagaalamay oo ka hadlay
By Mahad	 On Jan 3, 2022
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya xaalada magaalada Beledweyn, halkaasoo shalay ku dagaalameen ciidamo taabacsan maamulka Hirshabelle iyo kuwo ka soo horjeedo oo bilihii la soo dhaafay isku uruursanayay magaalada.
Sida wararku sheegayaan, dagaalka oo ahaa mid culus waxa uu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Qowlad oo qiyaastii 12Km waqooyi uga beegan xaruunta gobolka Hiiraan ee Beledweyne.
Janaraal Abuukar Xaaji Warsame (Xuud) oo ah sarkaalka hogaaminayay ciidanka weerarka lagu qaaday ee ka soo horjeeda Hirshabelle, ayaa ku goodiyay iney jawaab ka bixinayaan weerarka dhankooda lagu soo qaaday, isagoo ka gaabsaday inuu bixiyo xog ku saabsan khasaaraha gaaray.
“Waxaan hadda joogaa Beledweyne, dhamaan xaafadaha ciidankeyga ayaa haysta, waxaan ka jawabeynaa weerarkii shalay na lagu soo qaaday. Waxaa aan dhiseeynaa maamulka Hiiraan State, HirShabelle kama sii shaqeeyn doonto Hiiraan,” ayuu yiri Jeneraal Xuud.
Waxa uu dhinaca kale sheegay in duulaankan ay gadaal ka riixeyso dowladda federaalka oo sida uu hadalka u dhigay diidan awoodooda, isagoo ku celiyay mowqifiisa ku aadan sida uu u daneynayo in maamul gooniyo loogu sameeyo gobolka Hiiraan.
“Maammul la yirahdo HirShabelle kama jiro Hiiraan Waxa dhacaya oo dhan, waxay u dhacayaan waa intaa. Sida dowladda federaalka khasabka iyo juujuubka ah ee ay ku dhisatay (maamulka Hirshabelle) si aan aqbali karno oo aan yeeli karno ma aha. Annaga Hiiraan baa nala yirahdaa…gobolkan waa gobol gobolladii kale ka haray, xaqdarrada intaasi la’eg oo nagula sameeyay ayaan ka dhiidhinay oo aan diidannahay,” ayuu yiri Janaraal Xuud.
Dhinaca kalena, Gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali jeyte ayaa dhankiisa sheegay in guul ay ka gaareen weerarkii shalay, wuxuuna carabka ku goday in kooxdii la dagaalameysay ay u baxsadeen dhinaca deegaano ay duleedka Beledweyn ka joogaan kooxda Al-Shabaab.
Several people were killed in a suspected Al Shabaab attack in Kenya
Shirka Golaha Wadatashiga Qaran oo maanta Muqdisho ka furmayo